Farqiga u dhexeeya fayrasyada iyo bakteeriyada: astaamaha iyo falanqaynta | Dib -u -cusboonaysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | 15/09/2021 18:38 | Deegaanka
Markaan xanuunsanno oo aan ku qasbannahay inaan adeegsanno dawooyin kala duwan, asalka cudurku wuxuu inta badan ku wareersan yahay inuu sababay fayras ama bakteeriya. Way badan yihiin farqiga u dhexeeya fayraska iyo bakteeriyada taas waa in la tixgeliyaa marka la daaweynayo calaamadaha kala duwan iyo ka hortagga waxyeellada halista ah.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa waxa ay ku kala duwan yihiin fayrasyada iyo bakteeriyadu iyo maxay yihiin cudurrada ugu waaweyn.
2 Qeexitaanka bakteeriyada iyo fayraska
3 Farqiga u dhexeeya fayrasyada iyo bakteeriyada
Fayrasyadu way ka yar yihiin bakteeriyada waxayna leeyihiin awood weyn oo is -beddelid iyo faafin. Xanuunada ay keenaan labadan nooc ee jeermiska waxaa loo daweeyaa siyaabo aad u kala duwan.
In kasta oo xog yar oo dheeri ah la og yahay, adduunka waxaa jira shaki badan oo ku xeeran coronavirus -ka cusub. Su'aalo badan, jaahilnimo darteed ama xog khaldan awgeed, inta badan dadweynaha su'aashu waxay ka dhalataa haddii coronavirus -ka lagu daaweyn karo antibiyootiko. Jawaabtu waa maya: wax fayras ah laguma daaweyn karo antibiyootiko, kuwaas oo kaliya loo isticmaalo in lagu daaweeyo caabuqyada ay keento bakteeriyadu. Cudurrada ay keenaan fayrasyada iyo bakteeriyadu siyaabo aad u kala duwan ayaa loo daweeyaa sababtoo ah si isku mid ah uguma dhaqmaan jirka ay saameeyaan.
Fayrasyada iyo bakteeriyadu baaxad ahaan aad bay u yar yihiin, waxayna ku dhow yihiin meel kasta, waxayna sabab u yihiin cudurro badan. Laakiin isku mid maahan.
Qeexitaanka bakteeriyada iyo fayraska
Bakteeriyadu waa noole hal unug leh waxayna ka helaan nafaqooyin deegaanka ay ku nool yihiin. Waxay sababi karaan dhibaatooyin sida daloollada, caabuqyada kaadi mareenka, caabuqyada dhegta, ama dhuunta strep, si aan u xuso dhawr. Laakiin bakteeriyadu had iyo jeer ma keento cudurro: qaarkood waxay leeyihiin saamayn waxtar leh, tusaale ahaan, caawiyaan shaqada caadiga ah ee habka dheef -shiidka, Waxay caawiyaan habaynta iyo helitaanka nafaqooyinka cuntada waxayna ka hortagaan bakteeriyada waxyeellada leh inay soo gasho. Noocyada bakteeriyada qaarkood ayaa xitaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo daawooyin ama tallaallo nafaha lagu badbaadiyo.
Fayrasyadu way ka yar yihiin bakteeriyada. Iyagu ma aha unugyo dhan: waa uun walxo hidde ah oo ku dhex jira lakabka borotiinka. Waxay u baahan yihiin dhismayaal unugyo kale si ay u tarmaan, taas oo macnaheedu yahay in aysan kaligood noolaan karin haddii aysan ku noolaan noolaha kale (sida dadka, dhirta, ama xayawaanka).
Fayrasyada qaarkood waxay dili karaan bakteeriyada ama waxay la dagaallami karaan fayrasyo ​​dilaa badan. Waxaa loogu yeeraa bakteeriyada ama bakteeriyada ("liqid" Giriigga): waxay qaadsiiyaan oo burburiyaan bakteeriyado gaar ah oo ku yaal xuubabka dheef -shiidka, neefsashada iyo hababka taranka.
Fayrasku muddo gaaban ayuu ku noolaan karaa unugyada nool. Si kastaba ha ahaatee, mar haddii ay galaan jidhka bini'aadamka, si dhakhso ah ayay u tarmaan waxayna dadka ka dhigi karaan buka. Waxay sababi karaan xoogaa xanuunno khafiif ah, sida hargabka caadiga ah, iyo cudurro kale oo daran, sida furuqa ama AIDS -ka, oo uu sababay fayraska difaaca jirka ee aadanuhu (HIV).
Waxay leeyihiin awood is -beddel oo xoog leh, taas oo aan macnaheedu ahayn inay noqdaan kuwo aad u dagaal badan, laakiin agabkooda hidda -wadaha ayaa is -beddelay, taas oo ah, qaab -dhismeedka hidde -sidaha fayraska ee ku dhex jira walxaha wuxuu noqon karaa DNA ama RNA. Fayrasyadu sidoo kale waxay leeyihiin awood faafin oo sarreysa, taasoo keenta cudurro faafa, marka cudur faafa uu ku faafo dalal badan.
Waxaa jira kala duwanaansho fara badan oo u dhexeeya fayrasyada iyo bakteeriyada, maadaama aan hoos ku taxanno oo aan faahfaahinno hoos ku qoran:
Cabbir: bakteeriyadu waxay 100 jeer ka weyn yihiin fayrasyada. Iyadoo la tixgelinayo in labada xaaladoodba, ay yihiin kuwo aan indhaha aadanaha arki karin oo kaliya lagu ogaan karo mikroskoob gaar ah. Bakteeriyada waxaa lagu arki karaa microscope -ka indhaha, halka fayrasyada lagu ogaan karo oo keliya mikroskoob elektaroonig ah, iyadoo la isticmaalayo muraayadaha elektromagnetiga.
Qaabka: halabuurka fayrasku wax yar buu ka fudud yahay, oo ka kooban hidde -wadaha RNA ama qayb DNA oo ku duuban jaakad borotiin ah. Taa bedelkeeda, bakteeriyadu waxay leedahay qaab dhismeed gudaha ka sii adag oo derbigooda unuggu waa meesha cytoplasm, ribosomes, iyo hidde -wadaha bakteeriyada.
Taranka: Tani waa dhibaato kale oo fayrusyada iyo bakteeriyadu aysan wadaagin. Bakteeriyadu waxay leedahay awood ay ku koraan oo ku tarmaan keligood. Qaybo badan ayaa laga abuuri karaa unugyadan. Fayrasyadu awood uma laha inay kaligood kala qaybsadaan, waxay si aan dhammaad lahayn u tarmaan oo u weeraraan unugyo kale si ay u gudbiyaan macluumaadka hidde -sidahooda. Way ku tarmaan, laakiin unugyada martida ku nool way qaadsiiyaan waxayna keenaan cudur.
Resistance: Bakteeriyadu waxay ka jirtaa ku dhawaad ​​dhammaan deegaannada dhulka waxayna farsamadooda ka dhigtaa mid aad u adkaysi leh. Sababtaas awgeed, si ka duwan fayrasyada, waxay ku noolaan karaan heerkulka ba'an waxayna ku noolaan karaan waqtiyo ka baxsan noolaha kale. Xaqiiqda kale ee sii kordhisa awoodooda ayaa ah inay ka heli karaan cunto ilo badan oo kala duwan, dabiici ah iyo aan dabiici ahayn.
Marka laga hadlayo fayrasyada, guud ahaan, waxay ku noolaan karaan saacado ama xitaa maalmo, gaar ahaan birta birta adag ama meelaha balaastigga ah, laakiin waqti ka dib, faafahoodu wuu yaraan doonaa sababta oo ah fayrasyadu ma tarmi karaan.
Daaweynta: farqiga ugu weyn ee u dhexeeya fayrasyada iyo bakteeriyada. Antibiyootigyadu waxtar uma leh fayraska, ma dili karaan, sidoo kale waxay halis weyn u yihiin bukaanka sababtoo ah soo bixitaanka iska caabbinta bakteeriyada. Isla mar ahaantaana, daawooyin fayruska ka hortaga ayaa la soo saaray si ay u weeraraan fayrasyada qaarkood.
Haddii ilaha cudurku yahay bakteeriya oo antibiyootiko ku filan la heli karo, daaweyntu waa mid aan qaali ahayn, marka la dhammaystiro qorshaha daaweynta, badiyaa caadi ayay ku soo noqon doontaa dhawr maalmood ama toddobaadyo gudahood. Haddii asalka cudurku uu yahay fayras, xaaladdu way adkaan doontaa maxaa yeelay ma jirto heer u dhigma daawooyinka fayraska kahortaga labadaba iyo waxtar ahaanba.
Sidaa darteed, xirfadlayaasha daryeelka caafimaadku waxay la kulmaan daaweyn wax ku ool ah oo ah caabuqyada bakteeriyada aadka u faafa iyo caabuqyada fayraska ee ay keenaan fayrasyadu. Fayrasyadan uma eka sida cudur -sidaha, laakiin ma jiraan daaweyn wax -ku -ool ah. Sidaa darteed, waxaa loo adeegsadaa dadka waayeelka ah ee leh habdhiska difaaca daciifka ah si loo fiiriyo haddii cudur -sidaha uu yahay mid aad u daran ama hore ugu jiray bukaanka.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto kala duwanaanshaha u dhexeeya fayrasyada iyo bakteeriyada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Farqiga u dhexeeya fayrasyada iyo bakteeriyada